‘ढिलासुस्ती युगको अन्त्य भएको छ, अब विकास निर्माणमा फड्को मार्छौं’ सुशील भट्ट, सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
मनीषा अवस्थी बुधवार, माघ २९, २०७६, १३:०६:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैँ । सरकारले ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक’ स्थापना गरेको छ । आयोजना बैंक स्थापना भएपछि चालू र नयाँ गरी १ सय ९४ वटा संघीय आयोजनाहरुलाई बैंकको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेटिएको छ ।‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक’ ले अब पूर्वतयारी सकिएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने कार्यक्रम पनि यही प्रणाली अनुसार तयारी भइरहेको योजना आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोजना बैंकका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवंम् आयोजना बैंक संयोजक ईञ्जिनियर सुशील भट्टसँग इकोनोमिक पोष्टका लागि मनीषा अवस्थीले गरेको कुराकानीः
आयोजना बैंक के हो?
‘आयोजना बैंक’ राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थापना गरेको आवश्यकताको प्राथमिकताका आधारमा छनोट भएका योजनाको व्यवस्थित स्वरुप हो । आयोजनाको पहिचान, मुल्यांकन, छनौट, प्राथिमिकिकरण, सन्तुलनपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने आयोजनाको संग्रह आयोजना बैंकमा हुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७४, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३ र ४४ औं बैठकका निर्णय, आर्थिक कार्यबिधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धि मापदण्ड २०७६ र १५ औं योजनाको आधारपत्रका आधारमा ‘आयोजना बैंकको स्थापना भएको हो ।
यसमा ‘राष्ट्रिय योजना आयोग व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ को प्रयोग गरिएको छ । जहाँ आयोजनाको बिस्तृत अध्ययनको विवरणसहित राखिएको हुन्छ । यी आयोजनाहरु मात्रै कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्नेछन् । अहिलेसम्म १ सय ३४ वटा चालू आयोजना र ६० वटा नयाँ आयोजना गरी १ सय ९४ वटा संघीय आयोजनालाई यो प्रणालीमा राखिएको छ ।
यसको आवश्यकता किन महशुस भयो ?
हामीले विभिन्न आवधिक तथा दीर्घकालीन योजनाहरु बनाउँछौं । त्यहाँ क्षेत्रगत योजना तथा राष्ट्रकै समष्टिगत योजनाहरु, आर्थिक विकासका लक्ष्यहरु समेटिएका हुन्छन् । ती प्राप्ती गर्नका लागि हामीलाई स्पष्ट बाटो हुनुपर्छ । हाम्रा लक्ष्यभित्र आधारभुत विकास निर्माण वा पूर्वाधार निर्माणका कुरा त छन् तर ती कसरी पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने स्पष्ट खाका छैन ।
सम्बृद्धि हासिल गर्नका लागि हामीलाई नतिजामुखी आयोजना चाहिएका हुन्। नेपालका अहिलेसम्मका विकास योजनाहरु अव्यवस्थित भए । जसका कारण समयमा काम सम्पन्न नहुने गम्भीर समस्या छ । आयोजनाको कार्यान्वयनका चरणमानिर्धारित समयावधिमा काम नसकिदा समयमा त पछि परिन्छ परिन्छ, सँगै आर्थिक भार पनि बढिरहन्छ ।
यसको मुख्य समस्या नीतिगत एकरुपताको अभाव र आयोजना छनोटमा समस्या छ । अहिलेसम्मको परिपाटी हेर्दा आयोजना लाभान्वितहरुको आवश्यकताको प्राथमिकिकरण गरी आयोजना चक्र व्यवस्थापनमा पहिल्यै तयारी गरिदैन ।
हो, यही तदर्थवादलाई चिर्र्न साझा मागलाई सम्बोधन गरी विकास निर्माणमा फड्को मार्नका लागि यो आयोजना बैंकको स्थापना भएको हो । जसअन्तर्गत सबैभन्दा पहिला आयोजनाको आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकिकरण गर्ने, त्यसपछि बिस्तृत अध्ययन गरी, पूर्र्व तयारीका कामहरु रहेका हुन्छन् । यसले दातृ निकायको निर्देशनमा आयोजना अगाडि बढ्ने परिपाटीको पनि अन्त्य हुन्छ । यसैगरी सांसद तथा पार्टी कार्यकर्ताहरुले फाइल बोकेर आफ्नो खल्तीका आयोजना पास गराउने परिपाटी जरैदेखि उखेलिन्छ भने निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ । समग्रमा नेपालको व्यवस्थित विकासका लागि आयोजना बैंक कोशे ढुंगा सावित हुनेछ ।
‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक’मा कुन प्रकृतिका आयोजना रहन्छन् ?
आयोजना बैंक कार्यान्वयन तथा लगानी योग्य आयोजनाहरुको संग्रह हो । त्यसैले यहाँका सबै आयोजनाहरु आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकिकरण गरी पूर्व अध्ययन तथा पूर्व तयारी भइसकेका हुन्छन् । कुनै अमुक पार्टीका कार्यकर्ताको चाहनामा नभइ त्यहाँका बहुमत जनताको आवश्यकताको प्राथमिकताका आधारमा आउने आयोजना भएकाले न्यायोचित र नतिजामुखी आयोजनाहरु यहाँ समेटिन्छन् । यहाँका सबै आयोजनाहरुका आगामी अवस्थाबारे अध्ययन गरी जीवनचक्र पनि व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ ।
अहिले धेरैजसो अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहहरु आयोजना पहिचान नै गर्न नसकेर अलमल्ल छन् । उनीहरुका आयोजनाहरु ‘आयोजना बैंकमा कसरी समेटिन्छन् ?
आयोजना बैंक भर्खरै शुरुवात भएको छ । हामीले राष्ट्रिय योजना बैंक सम्बन्धि दिग्दर्शन बनाएका छौं त्यसबाट धेरै कुराहरुथाहा हुन्छ ।
योसँगै स्थानीय तहका योजनाहरु व्यवस्थित गर्नका लागि जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखिकरण दिनु पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । किनभने, उहाँहरुले सिकेको फाइल बोकेर योजना आयोग धाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने छ भने अर्को आयोजनालाई व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्को कुरा स्थानीय तहको हकमा अनुकुल नीति बनाउन सकिन्छ । जस्तो एउटा गाउँपालिका भवन बनाउँदा बिस्तृत आयोजना अध्ययन चाहिँदैन यसमा इञ्जिनियरिङ अध्ययन भए हुन्छ । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा पूर्व तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने ठूलो आयोजनाले हो । त्यसकारण स्थानीय तहका आयोजना साना नै हुने भएकाले त्यसैअनुसारको नीति बनाएर काम गर्न सकिन्छ ।
अबको आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ?
हामीले माथि भनेझैं विभिन्न चरणमा आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । सबैभन्दा पहिला अथवा पहिलो चरणमा सम्बन्धित क्षेत्रका जिम्मेवार निकायले आयोजना पहिचान गर्नेछ । त्यसको प्रतिफलबारे स्पष्ट रुपमा अवधारणपत्र बनाइनेछ । सो अवधारण पत्र स्वीकृत हुन्छ ।
त्यसपछि दोस्रो चरणमा मात्रै मुल्यांकन गरी कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव गरिन्छ । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि आयोजनाको छनोट र प्राथमिकिकरण गरिन्छ । त्यसपछि आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा सूची तयारी गरिन्छ । त्यसपछि मात्रै आयोजना बैंकमा समावेश हुनेछ ।
आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन, प्रभावितको संख्या, वातावरणीय अध्ययन, मुआब्जा वितरणको अवस्था, स्रोतको व्यवस्थापन लगायतका आयोजनाका विविध पाटोबारे पूर्व तयारी गरिएको हुन्छ । तिनै आयोजनाहरुमध्ये प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि बजेट बाँडफाँड गरिनेछ । आयोजनाको स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा अगाडि बढाइन्छ ।
पुराना आयोजनाहरुको हकमा कसरी सुचिकृत गरिन्छ ?
पुराना आयोजनाहरुलाई पनि नयाँको जस्तै पुनःप्रथमिकिकिरण गरिन्छ । अहिलेको कनिका छरेकोजस्तो बजेट होइन कि प्राथमिकताका आधारमा समयमा सम्पन्न हुने गरी बजेट बिनियोजन गर्ने वातावरण बनाउने काम आयोजना बैंकले गर्नेछ ।
यो आयोजना बैंकको स्थापनासँगै समयमा काम नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदै विकास निर्माण नयाँ फड्को मार्दैछ नेपालले ।
अहिले त शक्तिका आधारमा आयोजनाहरु पारित गराउने परिपाटी चल्दै आएको छ । यही अवस्थामा यो प्रणालीअनुसार चलाउन कत्तिको चुनौति छ ?
हामी कार्यान्वयनमा गइसकेका छौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले एउटा आयोजना बैंक रहनेछ । त्यो आयोजना बैंकमा योजना आयोगले बनाएको मापदण्ड अनुरुप प्रविष्ट भएका आयोजना र कार्यक्रमलाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिनेछ र वार्षिक विकास कार्यक्रममा पनि चयन हुनेछ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । अब कसैले मान्दिन भनेर हुन्छ? कानूनले नै बाध्यकारी बनाएको छ ।
खुशीको कुरा त के हो भने, अब त ढिलासुस्तीको युगको अन्त्य भएको छ । प्राकृतिक विपत्तिबाहेकको अवस्थामा आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन्छन् । यसैगरी अब बसेर खाने कर्मचारी र मन्त्रीका दिन पनि गए । सबैले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । आयोजना बैंकले हरेक मन्त्रालयका योजना महाशाखाको जिम्मेवारी प्रभावकारी बनाउनेछ ।
आयोजना छनोट र कार्यान्वयनका तहसम्म पुग्दा अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण चरणहरु प्रष्टसँग उल्लेख गरिएका छन्। यसैअनुरुप अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी अघि बढाइसकेको छ। आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना मात्रै आगामी बजेटमा समावेश गराउने गरी काम अघि बढाइने छ ।
नयाँ प्रणाली लागु गर्न चूनौतिहरु हुन्छन् । तर यसले व्यवस्थित रुपमा नतिजामुखी आयोजना अघि बढाउँछ नि ।
रेल विभागको उपलब्धिहीन एक दशक विभाग स्थापना भएको एक दशकको इतिहासमा पनि नेपालीहरुले रेलका कुरा गीतमै सुन्नुपरेको तितो सत्य छ । शनिवार, माघ २५, २०७६, ०९:०७:००
'भ्यालेन्टाइन डे' र नेपाली मौलिकता शुक्रवार, फाल्गुन २, २०७६, १७:०९:००
‘भ्रमण वर्ष सफल बनाउन ‘एक्सन’मा जाऔं’ सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० आउन अब १ दिन मात्रै बाँकी छ । पर्यटनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने सबैले आ-आफ्नै तरिकाले तयारी गरिरहेका छन् । सरकाले बुधबार सन् २०२० को पहिलो दिन टुँटिखेलमै भब्य कार्यक्रम गरी भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्दैछ... सोमवार, पुष १४, २०७६, १७:४१:००